2009 Motion Pictures
Submit	Contact	Home	Winner List	2011 Academy Awards 2010 Academy Awards	2008 Academy Awards	2009 Academy Awards	Motion Pictures	2011 Motion Pictures 2010 Motion Pictures	2009 Motion Pictures	2008 Motion Pictures	Gallery	(2011) 2009 Award SnapShot	2007 Award SnapShot	2008 Award SnapShot	Exhibition	(History) Academy	(Legacy) Academy Museum	Coming Soon! 2011 Academy Talk	Live!	သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ အောင်ရဲလင်း၊ မိုးဟေကို၊ စိုးပြည့်သဇင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ထုတ်လုပ်ရေး - မဟာထွန်း ဒါရိုက်တာ - ကြည်ဖြူသျှင် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - ဒေါက်တာမသက်ရီမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနမှ ကထိကတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေဖြစ်သူ အငြိမ်းစားတရားဝန်ကြီး ဦးမင်းခိုင်က ဖိတ်ခေါ်၍ ပေါင်းတည်မြို့သို့ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးအုန်းလှိုင်က မသက်ရီကို လာကြိုရင်း အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးမင်းခိုင် အရေးကြီးကိစ္စပေါ်၍ ခရီးထွက်သွားကြောင်းပြောသည်။ Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ မိုးယုစံ
ထုတ်လုပ်ရေး - စင်ရော် ဒါရိုက်တာ - စင်ရော်မောင်မောင် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - လတ်ငြိမ်းသည် ပြန်တမ်းဝင်အရှိကြီး ဦးခင်မောင်လတ်နှင့် ဒေါ်ခင်မေ၀င်းတို့၏ သားဖြစ်သည်။ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသည်။ နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွင် သိန်းမိုး၊ သွယ်စုလှိုင်တို့နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။ လတ်ငြိမ်းမှာ ပထမနှစ်တွင် သူငယ်ချင်းများကြောင့် ကျောင်းသူ စိုးစိုးမာနှင့် ရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။ Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - မြင့်မြတ်၊ ခင်သန်းနု၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ထွန်းအိန္ဒြိာဗို၊ မေသန်းနု၊ နန်းဆုရတီစိုး၊ သဇင်၊ မယ်လိုဒီ၊ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်
ထုတ်လုပ်ရေး - မဟော်ဂနီ ဒါရိုက်တာ - ၀ိုင်း ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - ကလျာငြိမ်း၊ သူဇာဆန်း၊ သန္တာထွေးဆိုသည့် စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိသည်။ သုံးဦးစလုံးပင် နှင်းဆီပန်းကို အကြိုက်ချင်းတူ၍ အဖြူ၊ အနီ၊ အ၀ါ အရောင်သုံးမျိုးကို တစ်ဦးစီ စွဲလမ်းနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုမိန်းကလေးသုံးဦးစလုံးပင် အလှရော၊ ဓနဂုဏ်ပါ ပြည့်စုံကြသူများဖြစ်သော်လည်း ဘ၀နိမ့်ပါးသူကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း မာမာဦးပေါ်တွင်တော့ သံယောဇဉ်ကြီး၍ ဖြည့်ဆည်းပေးကြရာ ..... Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ ရန်အောင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ဗေလုဝ
ထုတ်လုပ်ရေး - ကမ်းထရီးစတား ဒါရိုက်တာ - ညီညီထွန်းလွင် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - သရုပ်ဆောင် နေတိုးရဲ့ ထူးခြားသော သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အလွန်ကို ကောင်းမွန်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးသော မာမီရှိန်းတစ်ယောက် မိသားစုပြဿနာကြောင့် မိန်းမ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရသော်လည်း သမီးကို ချစ်တဲ့စိတ် မိန်းမအပေါ်တွင် ထားရှိသော သံယောဇဉ်တို့ကြောင့် ...... Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - ရန်အောင်၊ နိုင်းနိုင်း၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ပုလဲဝင်း၊ ချိုပြုံး
ထုတ်လုပ်ရေး - စနိုးဝှိုက် ဒါရိုက်တာ - မောင်မောင်ဦး (စနိုးဝှိုက်) ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - မိုးအောင်စံနှင့် ဆွေဆက်စံတို့ မောင်နှမနှစ်ဦးမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသူများဖြစ်သည့်အပြင် ၄င်းတို့နှစ်ဦး၏ ဂုဏ်အရှိန်အ၀ါကြောင့် သူငယ်ချင်းများအကြား ထင်ရှားသူများဖြစ်သည်။ မိုးအောင်စံဘွဲ့ရပြီးနောက် လုပ်ငန်းကြီး တည်ထောင်ပြီး လက်ထပ်ရန် ချစ်သူ ခင်လေးသူ ရှိသည်။ ခင်လေးသူမှာ မိုးအောင်စံ၏ ပျော်ပျော်နေတတ်သော အကျင့်ကို အစဉ်နားလည်းခွင့်လွှတ်သူ ဖြစ်သည်။ .... Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - လွင်မိုး၊ လူမင်း၊ ခန့်စည်သူ၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ မေကဗျာ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ အေးမြတ်သူ
ထုတ်လုပ်ရေး - ဘဲလ်မြန်မာ ဒါရိုက်တာ - မိုက်တီး ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - မောင်နိုင်၊ ခင်မောင်သန့်နှင့် ပိုင်ပိုင်တို့ သုံးဦးမှာ တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မောင်နိုင်မှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ပါးသောက်စားသည့်အတွက်ကြောင့် ပျိုပျိုမေနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ကွဲသွားကြသည်။ ..... Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ ရဲအောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ စိုးပြည့်သဇင်
ထုတ်လုပ်ရေး - မိုးပုလဲ ဒါရိုက်တာ - အဏ်ထော်ဏီ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - (နေတိုး)တစ်ယောက် မိန်းမခိုးရန် သူငယ်ချင်းများနှင့် တိုင်ပင်သည်။ ကံမကောင်းချင်တော့ သူ၏ချစ်သူဖြစ်သူ (စိုးပြည့်သဇင်)က အမေနှင့် မခွဲနိုင်သောကြောင့် အမေ(စိုးမြတ်သူဇာ)ကိုပါ တစ်ခါတည်းခေါ်လာရသည်။ ယောက္ခမဖြစ်သူမှာ သူမတို့သားအမိနှစ်ယောက်၏ အ၀တ်အစားများကိုလျှော်ခိုင်းသည်။ Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ နန္ဒလှိုင်၊ ညွန့်ဝင်း၊ ဗေလုဝ၊ ဟဲဗီးဖြိုး
ထုတ်လုပ်ရေး - နယ်သစ်ဦး
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - ဇော်ဂျီသည် ဆေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လျက်ဆားထုပ်များကို ဇော်ကကရင်း ရောင်းချပြီး ဘ၀ကို ရုန်းကန်နေရသည်။ ဇော်ဂျီတွင် အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိသည်။ အစ်ကိုမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်းတွင် အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ကလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားပြီး ဆေးရောင်း၊ ဇော်ကကရင်း နှစ်ယောက်အတူ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းကြသည်။ Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - သူထူးစံ၊ မိုးအောင်ရင်၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ မေသန်းနု၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ သင်ဇာဝ့င်ကျော်၊ မယ်လိုဒီ၊ နန်းဆုရတီစိုး
ထုတ်လုပ်ရေး - လပ်ကီးဆဲဗင်း ဒါရိုက်တာ - ညီညီထွန်းလွင် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - ဒေါ်မိုးသိဂီတွင် မိုးထက်မြင့်နှင့် မိုးထက်ကျော်သားနှစ်ဦးရှိသည်။ မိုးထက်မြင့်မှာ ဒါရိုက်တာရူးဖြစ်၍ မိုးထက်ကျော်မှာ မင်းသားရူးဖြစ်သည်။ မိုးထက်မြင့်တို့ အလှူတစ်ခုတွင် ဗီဒီယိုရိုက်ပေးရင်း အပျိုကြီး ပုံပျက်ပန်းပျက် မို့မို့စံကွားနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ သူ့မက ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးပါက ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို စိုက်ပေးမည်ဟု ပြော ကာ မိုးထက်မြင့်တို့က ခါနေသည်။ Read More ( Click On the Picture )
သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ ကျော်ရဲအောင်၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ တင့်တင့်ထွန်း
ထုတ်လုပ်ရေး - ဖီးနစ် ဒါရိုက်တာ - ဦးသိန်းဟန် (ဖီးနစ်) ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း - - ဖီးနစ်ထုတ်လုပ်ရေးကထုတ်လုပ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းဟန်(ဖီးနစ်)က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ကျော်ရဲအောင်နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့က မောင်နှမ တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ညီမဖြစ်သူရဲ့ ရေကူးသင်တန်းမှ ဆရာမအဖြစ် တင့်တင့်ထွန်းက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Read More ( Click On the Picture )
Local	Web	Images	ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ	သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ မိုးယုစံ ထုတ်လုပ်ရေး - စင်ရော် ဒါရိုက်တာ - စင်ရော်မောင်မောင် ဖာတ်လမ်းအကျဉ်း - လတ်ငြိမ်းသည် ပြန်တမ်းဝင်အရှိကြီး ဦးခင်မောင်လတ်နှင့် ဒေါ်ခင်မေ၀င်းတို့၏ သားဖြစ်သည်။ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသည်။ နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွင် သိန်းမိုး၊ သွယ်စုလှိုင်တို့နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။ လတ်ငြိမ်းမှာ ပထမနှစ်တွင် သူငယ်ချင်းများကြောင့် ကျောင်းသူ စိုးစိုးမာနှင့် ရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။
Posted by	CTO ADMIN
ဇော်ကကနေသည်	သရုပ်ဆောင် - နေတိုး၊ နန္ဒလှိုင်၊ ညွန့်ဝင်း၊ ဗေလုဝ၊ ဟဲဗီးဖြိုး ထုတ်လုပ်ရေး - နယ်သစ်ဦး ဒါရိုက်တာ - မီးပွား ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း - . ဇော်ဂျီသည် ဆေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လျက်ဆားထုပ်များကို ဇော်ကကရင်း ရောင်းချပြီး ဘ၀ကို ရုန်းကန်နေရသည်။ ဇော်ဂျီတွင် အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိသည်။ အစ်ကိုမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်းတွင် အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ကလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားပြီး ဆေးရောင်း၊ ဇော်ကကရင်း နှစ်ယောက်အတူ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းကြသည်။
Home	Winner List	2011 Academy Awards 2010 Academy Awards	2008 Academy Awards	2009 Academy Awards	Motion Pictures	2011 Motion Pictures 2010 Motion Pictures	2009 Motion Pictures	2008 Motion Pictures	Gallery	(2011) 2009 Award SnapShot	2007 Award SnapShot	2008 Award SnapShot	Exhibition	(History) Academy	(Legacy) Academy Museum	Coming Soon! 2011 Academy Talk	Live!	Who's Online
We have9guests online	Scroll To Top
Developed By Copyright © ( 2010 - 2012 ) MyanmarAcademyAwards.Com